Myanmar ralkap ithuthruainak ah rian an khinh ning hna le nawl ngeihnak rank dir hmun hna cu atang lei bantuk in “Uknak phung” Infantry le Light Infantry” theih kau nak, – Kawltu Team
Myanmar ralkap ithuthruainak ah rian an khinh ning hna le nawl ngeihnak rank dir hmun hna cu atang lei bantuk in “Uknak phung” Infantry le Light Infantry” theih kau nak,
Infantry lei ralkap ithuthruai ning ah, Batalion khat tang ah hin, company5an um, mah chung ah company pakhat cu madical, supply, communication, navy meithal lian kaptu hna tiin, cu bantuk an kalpi, company4hna cu zeitik can poh ah raldoh ding in ready ter peng khi asi, Company pakhatah ah hin corps3an um, corps pakhat ah hin section3an um fawn, section pakhat ah hin ralkap minung 10 an um, mah caah cun Batalion khat ah ralkap zeizat dahaum timi kha nan tuaktan kho cang lai.
Batalion pakhat ah hin ralkap 450 asi ah cun, minung 360 cu raldoh ding ah ready ter an si tinak asi, Batalion 10 hi Brigade pakhat an si, an then ning cu Brigade 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 tiin then asi, mah infantry/ light infantry hna hi an ral an tei lai lo tiah an itheih cang ah cun, zei poh tuah ding ah poi tinak angeih lem lo, Brigate 88, 99, 101 hna hi an si, atu kan hmuh ning ah hin brigade pakhat ah hin ralkap 4500 an um, Brigade 10 an si ah cun ralkap 45,000 an um lai tinak asi.
Mah brigade hna nih hin an hriamnam tlamtling tein an ngei dih hna, reserve le hriamnam lian hna, Cun phunkhat deuh ah Batalion bantuk thiamthiam ithuthruainak ngeih ve in, brigade 1-21 tiang an um, mah chung ah cun ralkap dih lak in minung 94,500 an um tinak asi, infantry le Light infantry hi fawnh in ralkap 139,500 an si, mah pin ah region kip ah ralkap an ngeih fawn hna, mah infantry hna hi second senior General-nih direct-in nawl pek khawhnak tang ah an um hna khi asi.
Brigade pakhat tang ah hin technician3an um, mah chung ah pakhat cu, mechanized le motorized hna an si, an hriamnam hna zong athatha an ngeih ve mi asi, Batalion commander cu Lt.-col. an rak si deuh ko, acan ah cun major hna zong nih an uk ve ko, company commander cu captain rank arsi3an si, corps commander cu arsi2ngei mi asi, Sectional commander cu afawinak in arsi pakhat an si, brigade/division commander cu brigadier-nih an uk, Technician nih hin Batalion3an uk khawh.
1. တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (Commander in Chief of Defense Services)
2. ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (Deputy Commander in Chief of Defense Services)
3. ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (Minster of Ministry of Defense)
4. ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) (Joint Chief of Staff ( Army, Navy ,Air))
5. ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) (Commander in Chief (Army))
6. ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ) (Commander in Chief (Navy))
7. ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (လေ) (Commander in Chief (Air))
8. စစ်ဆင်ရေးအထူအဖွဲ့မှူး (Chief of Special Operation Bureau)
9. စစ်ရေးချုပ် (Adjutant General)
10. စစ်ထောက်ချုပ် (Quartermaster General)
11. စစ်ရာထူးခန့်ချုပ် (Military Appointments General)
12. စစ်ဥပဒေချုပ် (Judge Advocate General)
13. စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ် (Chief of Military Security Affairs)
14. တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ် (Chief of Armed Forces Training)
15. တပ်မတော်စစ်ဆေးရေး အရာရှိချုပ် (Defense Services Inspector General)
16. လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိချုပ် (Air defense Officer)
17. ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအရာရှိချုပ် (Defense Equipment Production Officer)
18. စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ် (ကြည်း) (Chief of Staff (Army))
19. စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် (ရေ) (Chief of Staff (Navy))
20. စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် (လေ) (Chief of Staff (Air))
21. တွဲဖက်စစ်ရေးချုပ် (Vice Adjutant General)
22. တွဲဖက် စစ်ထောက်ချုပ် (Vice Quartermaster General)
23. တပ်မတော် တပ်ထိန်းချုပ် (Provost Marshal)
24. စစ်လက်နက်ပစ္စည်းညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Ordinance)
25. စစ်အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Military Engineering)
26. ဆေးဝန်ထမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Medical Services)
27. ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Signal)
28. ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Defense Services Procurement)
29. ပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်များ ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of People Militias and Frontier Forces)
30. ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of People Relation and Psychological Welfare)
31. ပြန်လည်နေရာချထားရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Resettlement)
32. သံချပ်ကာယန္တရားတပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Armor)
33. အမြောက်တပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Artillery)
38. ကျောင်းအုပ်ကြီး ( နကတ/ဥစတ/ စတသ)
41. ကျောင်းအုပ်ကြီး ( တနတ/တဆတ/တသဆ/ ဗသက/ တခရ /တအက/တတက)
42. ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး ( နကတ/ဥစတ/ စတသ)
43. ပါမောက္ခချုပ် (စတသ)
47. ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး ( တနတ/တဆတ/တသဆ/ ဗသက/ တခရ /တအက/တတက)
51. နည်းပြအရာရှိချုပ် ( စတသ/တနတ/ တနတ/တဆတ/တသဆ/ ဗသက/ တခရ /တအက/တတက)
53. စစ်ဗျူဟာမှူး (Tactical Operation Command)
59. ဒုတိယ တပ်ရင်းမှူး
61. ဦးစီးအရာရှိ (ဒုတိယတန်း)
63. စစ်ဦးစီးမှူး (တတိယတန်း)
64. ဦးစီးအရာရှိ (တတိယတန်း)
65. တပ်ရေးဗိုလ်ကြီး (Adjutant)
66. တပ်ထောက်ဗိုလ်ကြီး (Quarter Master)
67. ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ (Intelligence Officer)
68. ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ (Signal Officer)
69. ဆေးမှူး (Medical Officer)
70. ဆေးလက်ထောက် အရာခံဗိုလ် (Medical Assistant)
71. တပ်ရင်းတပ်ထောက် အရာခံဗိုလ် (Regimental Quarter Master Sergeant)
72. ရုံးအုပ်ကြီး (Head Clerk)
73. တပ်ကြပ်ကြီးစာရေး (Clerk)
74. တပ်စာရင်းကိုင် (Unit Accountant)
75. ဗိုလ်လောင်း (Cadet)
ရာထူးအဆင့်များ – Port Folio dirhmun hna:-
1. ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (Senior General)
2. ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (Vice Senior General)
3. ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (General)
4. ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (Lieutenant General)
5. ဗိုလ်ချုပ် (Major General)
6. ဗိုလ်မှူးချုပ် (Brigadier General)
7. ဗိုလ်မှူးကြီး (Colonel)
8. ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး (Lieutenant Colonel)
9. ဗိုလ်မှူး (Major)
10. ဗိုလ်ကြီး (Captain)
11. ဗိုလ် (Lieutenant)
12. ဒုတိယ ဗိုလ် (Second Lieutenant)
13. အရာခံ ဗိုလ် (Warrant Officer I)
14. ဒုတိယအရာခံ ဗိုလ် (Warrant Officer II)
15. တပ်ခွဲ တပ်ကြပ်ကြီး (Quarter Master Sergeant)
16. တပ်ကြပ်ကြီး (Sergeant)
17. တပ်ကြပ် (Corporal)
18. ဒုတပ်ကြပ် (Lance Corporal)
19. တပ်သား (Private)
Cre: Moses pa, karak pehthan te lai,
← Lailappur nih truck vuakchiat le drivers hna kut thlak ruang ah Vairengte nih joint VC le all NGO’s meeting biachahnak resolutian an passed mi cu,
Afghanistan ram cu hmailei panh kho tilo in muinak nih akhuh-adawn chinchin cang, →